Dowlad goboleedka Garissa oo 11 milyan ka heshay bangiga adduunka – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlad goboleedka Garissa oo 11 milyan ka heshay bangiga adduunka
Dowlad goboleedyada Garissa iyo Mandhera ee waqooyi bari ayaa ka mid ah ugu yaraan 13 ismaamul oo ka faaiideysanaya dhaqaale uu ku deeqay bangiga adduunka oo lagu horumarinayo nidaamka dowlad wadaajinta.
Lacagtan ayaa ah 1.9 bilyan oo shilin waxaana qeybinteeda lagu saleeyay waxqabadka dhanka horumarka ee ismaamulada.
Dowlad goboleedka Garissa ayaa helay 11 milyan , Mandhera ugu yaraan 6 Milyan, halka dhaqaalaha ugu badan la siiyay ismaamulka Busia oo ka faaiideysanaya 553 milyan oo shilin.
Maamulada kale ee lacagtan qeyb ka mid ah la siiyay ayaa kala ah Baringo (173 milyan ), Kiambu (238 milyan ), Makueni (168 milyan), Kisii (126 milyan), Nyandarua (282 milyan), Laikipia (111 milyan) ,Siaya oo ah 103 milyan ,Kajiado (18 milyan ), Kirinyaga (74 milyan) iyo Narok oo ah 81 milyan oo shilin.
Waxaa magaaladatani Nairobi xariga looga jaray wajiga labaad ee lacagahan lagu siinayay maamul goboleedyada dalka munaasabadaasi oo uu marti sharaf ka ahaa wasiirka wasaaradda dowlad wadaajinta Mr. Eugene Wamalwa iyo Anne Waiguru oo ah guddoomiye ku xigeenka golaha barasaabyada dowlad goboleedyada ee COG.
Wajigii 1-aad ee mashruucan waxaa , dhaqaalaha uu bixiyay bangiga aduunka ee World Bank ka faaideystay dhamaan 47-da maamul goboleed ee dalka.
Dhaqalahaasi ayaa ahaa 2.1 bilyan oo shilin oo loogu talagay mashariicda horumarineed waxaana la bixinyay marka ismaamul kasta uu haleelo hiigsiga loo qabtay.
Dowlad goboleedyada ayaa laga doonaya in deeqdan ay u adeegsadaan wanaajinta howlaha shaqaleysiinta, waxqabadka dhanka maamulka , xiriirka kala dhexeya dowlada dhexe iyo kobcinta aqoonta shacabka si ay uga qeyb qaataan afkaartoodana ugu biiriyaan barnaamijyada kala duwan.
← Baarlamaanka oo ansaxiyay safiiro iyo xoghayayaal la soo magacaabay
Masuul iska casilay wasaarada gargaarka Soomaaliya. →